ယုန်လေးရဲ့ ကြော်ငြာနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ပြင်းထန်စွာ ဝေဖန်ခံနေရတဲ့အပေါ် ပြန်လည်ဖြေရှင်းခဲ့တဲ့ အေးမင်းဟိန်း – Suehninsi
ဟာသတွေ ပရိသတ်တွေကို အမြဲတင်ဆက်ပေးပြီး video reaction တွေပြုလုပ်ပြီး ရယ်မောပျော်ရွှင်စေတဲ့ ဖေ့ဘုတ်စ် ဆယ်လီတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့အေးမင်းဟိန်းကတော့ လတ်တလောမှာ ပရိသတ်တွေကြားမှာအတော်လေးဝေဖန်မှုပြင်း ထန်နေတဲ့ကြော်ငြာမှာ ပါဝင်ရိုက်ကူးခဲ့ပါတယ် ။ဒီကြော်ငြာ ဗီဒီယိုကြောင့် သူ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေအပြင်းအထန်ခံခဲ့ရတာပါ ။ဒီကြော်ငြာနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး အေးမင်းဟိန်းဟာ Social Media
ပေါ်မှာတောင်းပန်ခဲ့သလို ယခုရက်ပိုင်းမီဒီယာတွေ့ဆုံမှုတစ်ခုမှာလည်းသူ့အနေနဲ့ ဒီလိုရွံစရာအပြုအမူတွေ ပြုလုပ်ခဲ့မိတဲ့ အပေါ် တောင်းပန်ကြောင်းဆိုလာခဲ့သလို ဝေဖန်မှုတွေကို ကျေကျေနပ်နပ်နဲ့ပဲ လက်ခံပါတယ်လို့ ဆိုသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အေးမင်းဟိန်းက “ဒီလိုဝေဖန်တာက အမြင်မတော်လို့ ဝေဖန်တယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်။တိုက်ခိုက်တယ်လို့တော့ မမြင်ပါဘူး။အကို့အနေနဲ့ ဒီလိုမျိုးမလုပ်သင့်ဘူးဘာညာတော့
ပြောကြတာတွေရှိပါတယ်။ကျွန်တော်လည်းပြင်ဆင်ပြောင်းလဲထားပါတယ်” ဆိုရှယ်မီဒီယာမှာအဲ့ဒီပို့စ်လေးတင်လိုက်တာက ရည်ရွယ်ချက်ကတော့ရှင်းပါတယ်။ကျွန်တော့အကောင့်ထဲမှာ ကျွန်တော့ကို အားပေးလာတဲ့ ပရိသတ်တွေပေါ့ အဲ့ဒီထဲမှာမှ ကလေးလေးတွေပါတယ် လူကြီးကြီးတွေပါတယ် အသက်တော်တော်ကြီးတယ်ပေါ့နော် ဦးဦးဒေါ်ဒေါ်တွေ လည်းပါတယ်ပေါ့နော် သူတို့တွေအတွက် အဓိကတောင်းပန်တာပဲဖြစ်ပါတယ် ကလေးလေးတွေ လူကြီးသူမတွေအတွက် မသင့်တော်တဲ့ အပြောအဆိုတွေ
အမူအရာတွေပြုလုပ်ခဲ့မိလို့ တောင်းပန်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ နောက်ဒီလိုကိစ္စမျိုးကရှိလာမှာမဟုတ်တော့ပါဘူး။နောက်ဆိုလို့ရှိရင် သေချာစဉ်းစားပြီးတော့ အလုပ်တစ်ခုကိုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်” လို့ ဆိုသွားခဲ့တာပါ။ “ကိုယ့်ကိုချစ်ပြီးတော့ အားပေးတဲ့ပရိသတ် မကြိုက်တာလုပ်မိတဲ့အတွက် နောင်တတော့ရတာပေါ့….အခုတော့ ကြိုးစားပြီးတော့ ပြန်လည်ပြင်ဆင်နေပါတယ် အဲ့ဒါကြောင့်မို့ ပရိသတ်တွေကလည်း
အပြစ်မမြင်ပဲ ဆက်ကြည့်ပေးကြဖို့ တောင်းဆိုချင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကအနုပညာရှင်လည်းမဟုတ်သေးပါဘူး ဝါသနာရှင်အဆင့်ပဲရှိပါသေးတယ် ကျွန်တော်ကြိုးစားနေဆဲပါ…. အနုပညာရှင်ဖြစ်အောင်လို့ တဆင့်ပြီးတဆင့် သူများတွေလို ခုန်ကူးသွားတာမျိုးမရှိပဲ Level တစ်ခုပြီးတစ်ခုပေါ့ အနုပညာရှင်မဟုတ်ပေမယ့် ဝါသနာရှင်တစ်ယောက်အနေနဲ့လည်း
ပရိသတ်ကအရေးကြီးပါတယ် မဟုတ်လို့ရှိရင်တစ်ယောက်တည်း Video တွေတင်ပြီးလမ်းပျောက်သလို ဖြစ်နေမှာပေါ့ ဒီကိစ္စအပေါ်မှာ ကျွန်တော့ကိုအားမလိုအားမရဖြစ်ပြီး ဝန်းရံပေးခဲ့ကြတဲ့သူတွေကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ ဆိုလာခဲ့တာပါပရိသတ်ကြီးရေ ယုန်လေးရဲ့ကြော်ငြာကတော့ ပြင်းထန်စွာဝေဖန်ခံနေရတာဖြစ်ကာ ပါဝင်ခဲ့သူတွေကတော့ အမှားရှိခဲ့ရင် တောင်းပန်ပါတယ်လို့ဆိုထားကြတာဖြစ်ပါတယ်။
ဟာသတှေ ပရိသတျတှကေို အမွဲတငျဆကျပေးပွီး video reaction တှပွေုလုပျပွီး ရယျမောပြျောရှငျစတေဲ့ ဖဘေု့တျဈ ဆယျလီတဈယောကျဖွဈတဲ့အေးမငျးဟိနျးကတော့ လတျတလောမှာ ပရိသတျတှကွေားမှာအတျောလေးဝဖေနျမှုပွငျး ထနျနတေဲ့ကွျောငွာမှာ ပါဝငျရိုကျကူးခဲ့ပါတယျ ။ဒီကွျောငွာ ဗီဒီယိုကွောငျ့ သူ့အတှကျဝဖေနျမှုတှအေပွငျးအထနျခံခဲ့ရတာပါ ။ဒီကွျောငွာနဲ့ ပတျသတျပွီး အေးမငျးဟိနျးဟာ Social Media
ပျေါမှာတောငျးပနျခဲ့သလို ယခုရကျပိုငျးမီဒီယာတှဆေုံ့မှုတဈခုမှာလညျးသူ့အနနေဲ့ ဒီလိုရှံစရာအပွုအမူတှေ ပွုလုပျခဲ့မိတဲ့ အပျေါ တောငျးပနျကွောငျးဆိုလာခဲ့သလို ဝဖေနျမှုတှကေို ကကြေနြေပျနပျနဲ့ပဲ လကျခံပါတယျလို့ ဆိုသှားခဲ့တာဖွဈပါတယျ။အေးမငျးဟိနျးက “ဒီလိုဝဖေနျတာက အမွငျမတျောလို့ ဝဖေနျတယျလို့ပဲမွငျပါတယျ။တိုကျခိုကျတယျလို့တော့ မမွငျပါဘူး။အကို့အနနေဲ့ ဒီလိုမြိုးမလုပျသငျ့ဘူးဘာညာတော့
ပွောကွတာတှရှေိပါတယျ။ကြှနျတျောလညျးပွငျဆငျပွောငျးလဲထားပါတယျ” ဆိုရှယျမီဒီယာမှာအဲ့ဒီပို့ဈလေးတငျလိုကျတာက ရညျရှယျခကျြကတော့ရှငျးပါတယျ။ကြှနျတော့အကောငျ့ထဲမှာ ကြှနျတော့ကို အားပေးလာတဲ့ ပရိသတျတှပေေါ့ အဲ့ဒီထဲမှာမှ ကလေးလေးတှပေါတယျ လူကွီးကွီးတှပေါတယျ အသကျတျောတျောကွီးတယျပေါ့နျော ဦးဦးဒျေါဒျေါတှေ လညျးပါတယျပေါ့နျော သူတို့တှအေတှကျ အဓိကတောငျးပနျတာပဲဖွဈပါတယျ ကလေးလေးတှေ လူကွီးသူမတှအေတှကျ မသငျ့တျောတဲ့ အပွောအဆိုတှေ
အမူအရာတှပွေုလုပျခဲ့မိလို့ တောငျးပနျထားခွငျးဖွဈပါတယျ။ နောကျဒီလိုကိစ်စမြိုးကရှိလာမှာမဟုတျတော့ပါဘူး။နောကျဆိုလို့ရှိရငျ သခြောစဉျးစားပွီးတော့ အလုပျတဈခုကိုလုပျသှားမှာဖွဈပါတယျ” လို့ ဆိုသှားခဲ့တာပါ။ “ကိုယျ့ကိုခဈြပွီးတော့ အားပေးတဲ့ပရိသတျ မကွိုကျတာလုပျမိတဲ့အတှကျ နောငျတတော့ရတာပေါ့….အခုတော့ ကွိုးစားပွီးတော့ ပွနျလညျပွငျဆငျနပေါတယျ အဲ့ဒါကွောငျ့မို့ ပရိသတျတှကေလညျး
အပွဈမမွငျပဲ ဆကျကွညျ့ပေးကွဖို့ တောငျးဆိုခငျြပါတယျ။ ကြှနျတျောကအနုပညာရှငျလညျးမဟုတျသေးပါဘူး ဝါသနာရှငျအဆငျ့ပဲရှိပါသေးတယျ ကြှနျတျောကွိုးစားနဆေဲပါ…. အနုပညာရှငျဖွဈအောငျလို့ တဆငျ့ပွီးတဆငျ့ သူမြားတှလေို ခုနျကူးသှားတာမြိုးမရှိပဲ Level တဈခုပွီးတဈခုပေါ့ အနုပညာရှငျမဟုတျပမေယျ့ ဝါသနာရှငျတဈယောကျအနနေဲ့လညျး
ပရိသတျကအရေးကွီးပါတယျ မဟုတျလို့ရှိရငျတဈယောကျတညျး Video တှတေငျပွီးလမျးပြောကျသလို ဖွဈနမှောပေါ့ ဒီကိစ်စအပျေါမှာ ကြှနျတော့ကိုအားမလိုအားမရဖွဈပွီး ဝနျးရံပေးခဲ့ကွတဲ့သူတှကေိုလညျး ကြေးဇူးတငျပါတယျလို့ ဆိုလာခဲ့တာပါပရိသတျကွီးရေ ယုနျလေးရဲ့ကွျောငွာကတော့ ပွငျးထနျစှာဝဖေနျခံနရေတာဖွဈကာ ပါဝငျခဲ့သူတှကေတော့ အမှားရှိခဲ့ရငျ တောငျးပနျပါတယျလို့ဆိုထားကွတာဖွဈပါတယျ။